Germany - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Dị ka ọtụtụ mba ndị ọzọ dị na Europe, Germany bụ ala nke nnukwu ụlọ. South nke Bavaria anyị na-ahụ ndị a ma ama atọ ...
Typicaldị ejiji ndị German na-abịa site na mpaghara Bavarian ma jiri ya na ezumike mba dị ka Oktoberfest.
Chọpụta iri na iri German obodo ebe ị ga-achọ ida onwe gị na-enwe n'akụkụ ọ bụla, ezigbo oghere mmeri maka gị ọzọ getaway.
5 Ngosi ihe mgbe ochie gara na Germany
N’isiokwu nke taa, anyị ewetara gị 5 ebe ngosi ihe mgbe ochie ileta na Germany. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga mba German n'oge na-adịghị anya, gbaa mbọ hụ na ị gara leta ha.
Gịnị ka ị kwesịrị ịma banyere Oktoberfest ememme na Munich?
Nyaahụ malitere ọhụụ ọhụrụ nke ememme German kachasị ewu ewu na ụwa: Oktoberfest. Ihe ngosi a, onye isiokwu ya ...
Oge ọkọchị 2016, ihe ị ga-ahụ na Germany
Anyị na-atụ aro ka ị mata Germany n'oge ọkọchị a: dee ebe ndị njem nleta kachasị mma! Ga-achọpụta obodo ndị mara mma, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, nnukwu ụlọ na obí eze!
Ihe ị kwesịrị ịma ileta Castle Neuschwanstein, na Jamanị
Les na-enwe mmasị n’ogige akụkọ ifo? Mgbe ahụ gaa na Neuschwanstein Castle, nke sitere na opera Wagner.
Ncheta White Rose na Munich
Na Munich, e nwere ihe ncheta dị mma nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị njem niile na-ahụghị: Weiße Rose (White Rose).
Gagharịa na limes, ókèala Rome oge ochie na Germany
Limes romanus bụ mpaghara mbụ nke Alaeze Ukwu Rom na Germany
Ogige ntụrụndụ ndị nudist nke Englischer Garten na Munich
Otu n'ime ụwa ebe omume ịgba ọtọ jupụtara ebe niile ma nabata bụ Germany. N’ebe ahụ ka ha kpọrọ ya Freikörperkultur (FKK), “omenaala ahụ mmadụ n’enweghị onwe ya”. Nke ukwuu nke na, ugbu a ihu igwe dị mma na-eru nso, Munich nwere oghere isii na-acha akwụkwọ ndụ n'ime ime obodo ya maka ndị na-eme ihe nkiri.
Abụọ ụlọ oge a Munich
Taa, anyị na-ekwu maka BMW Welt na Munich Olympic Park, ụlọ abụọ nke oge a
Flensburg, obodo German nwere mkpụrụ obi Denmark
N'ebe ugwu nke steeti Schleswig-Holstein, steeti ugwu kachasị na Germany, bụ obodo mara mma nke Flensburg, na ala ala Baltic fjord. Obodo German ma jiri mkpụrụ obi Danish. N'ezie, ókèala ya na Denmark dị naanị kilomita ole na ole ma n'okporo ámá ya asụsụ na ọdịnala nke mba Scandinavia a nọ ebe niile.
Akwa Ekwensu nke Kromlau na gburugburu ya
Obodo Kromlau nke dị na German nwere ogige nwere ihe owuwu pụrụ iche nke ndị Gothic, nke a maara dịka Akwa Ekwensu.
Ga ahịa dị na Frankfurt bụ ihe dị mkpa mgbe ị na-azụ ahịa n'obodo a.
Obodo Ingolstadt: nnukwu ụlọ ahịa ịzụ ahịa dị na ndịda Germany
N'ime ụlọ ahịa a na-akpọ Ingolstadt Village ị nwere ike ịchọta ihe karịrị otu narị ụlọ ahịa ọpụpụ.
Eiserner Steg, akwa mmiri dị na Frankfurt
Eiserner Steg ma ọ bụ Iron Bridge, bụ otu n’ime ebe anyị na-agaghị echefu ọbịbịa anyị na Frankfurt, nke ochie na njem.
Thelọ nkwari akụ kacha ochie na Europe, na Freiburg
A na-akpọ ya Zum Roten Bären (Red Bear) na ọ bụ ụlọ nkwari akụ kacha ochie na Europe. Ọ dị n'ime ụlọ ochie mara mma nke dị n'etiti Freiburg, isi obodo Black Forest na Germany. Emere ya na 1311, ya mere o nwere nari aro asaa. Edepụtara dị ka ụlọ nkwari akụ 4-kpakpando, ndị nwe ya na-ahọrọ ịkpọ ya "ụlọ obibi kacha ochie na Germany".
Ihe oyiyi na-atọ ọchị nke ndị egwu Bremen Town
Onye ọ bụla maara akụkọ a: a ga-egbu ịnyịnya ibu, nkịta, pusi na oke ọkpa na ala ubi ha maka ịbụ agadi na abaghị uru, yabụ ha gbapụrụ wee gawa ụwa na-ebi ndụ dị ka ndị egwu. Ha bụ ndị Bremen Town Musicians (die Bremer Stadtmusikanten), ndị edemede sitere n'akụkọ ama ama nke Brothers Grimm ndị nwere, n'ezie, nwere akpụrụ akpụ nke ha na obodo German a.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, ụgbọ mmiri Rhine na-enye ọdịdị ala dị ụtọ dị iche na nke afọ ndị ọzọ: Riesling village, castles and vineyar, si Koblenz ruo Mainz, anyị na-achọpụta akụkụ ọdịnala na maa mma nke ọdịda anyanwụ Germany.
Obodo ochie nke Passau na-achịkọta ụfọdụ ọmarịcha ebe dị n'obodo ahụ, dị ka n'ama ndị Katidral, Obibi na Town Hall.
Würzburg (Germany): ebe nlegharị anya kachasị mma na obodo Bavaria
Akwa Bridge nke Würzburg (Alte Mainbrücke), wuru n'etiti 1473 na 1543, rụrụ ọrụ ịnọchi nke Romeesque nke ...
Maka ndị Jamani, Rothenburg ob der Tauber bụ obere obodo na-ejigide aha ọma, ebe obodo a ...
Osimiri Bavaria na Germany
Anyị na-aga mpaghara nke Bavaria, na Munich, iji hụ ọdọ mmiri ya kachasị mma, nke dị na ndịda obodo German
Obodo Neuschwanstein, Bavaria, Germany. Ihi ụra Ulo mara mma
Dabere na mpaghara German nke Fuessen, na Bavaria, Eze Louis nke II nyere iwu ka ọ rụọ ya na 1866, ya na abụọ ...